jaceylka iyo lacagta keebaa awood badan waa qiso jaceyl oo ka dhacdey(magaalo Xeebeedka ee Mombasa) | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
jaceylka iyo lacagta keebaa awood badan waa qiso jaceyl oo ka dhacdey(magaalo Xeebeedka ee Mombasa)
Dhacdadaan ayaa waxay ka dhacday magaalo Xeebeedka ee Mombasa, iyadoo ay u dhaxeysay lamaane Somaliyadeed oo uu ka dhaxeeyey Jaceyl aanan caadi aheyn.
Hadaba wiilka ay dhacdadaan ku dhacday isagoo inoo sheekeeyey sidii ay wax u dhaceyn.
Hadaba lamaanahaan ayaa waxaa lagu kala magacaa Cali iyo Sagal. Waxayna ku bilaabaneysaa sidatan:-
Intaas kadib waxaa dareemay jaceyl inaan u qabo Sagal, hase yeeshee maanan u sheegan, anigoo ka cabsi qabay in�ay i dhahdo laba qof oo walaalo uun baa-nahay ee iga xishoo.
Jaceylkii aan u qabay ayaa igu-sii xoogeystay, Sagal qudheedu waa ay i jecleyd balse maanan aheyn qof dareemi karay in�ay i jaceshahay, ileen sirta dumarka lama bixin karee.
Waxaa inoo dhamaaday iskuulkii. Habeen habeenada kamid ah, anigoo yaaban garan la� waxaan sameeyo, ayaa inta aan indhaha isku qabtay, anigoo leh wixii ka dhacaayo haka dhaco caawa waa inaad sheegataa jaceylkaaga, ileen wixii aad qarsato waa ay ku qarsadaanee. Sagal ayaa wacay wareysi kadib, waxaan ku iri Sagal caawa waxan rabaa inaan ku sheego arin haddii aad maqasho laga yaabo in�aad si qalad ah u fahanto, waxaa laga yaabaa inaad ku faraxdo.
Aniga iyo Sagal jaceyl xilli dheer leh ayaa ina dhex maray, waxa noqonay laba qof oo leesku xanto. Waxaa noqonay laba qof oo lagu sheegi jiray in�ay yihin mucaashiqiin uu Jaceylkeedu yahay mid dhab ah, waxaana ku heshiinay Guur.
Waxaa jiray wiil walaalkey ah oo wax badan iga weynaa, kuna noolaa dalka Finland, ayaa wacay una sheegay in�aan jeclahay gabar uu magaceedu yahay Sagal, kuna heshiinay Guur. Durbadiiba walaalkey iga aqbaly in uu i sameyn karo, wax walbo oo aan uga baahdo.
Sagal oo yaaban misa-na uu xaalka ku xun yahay ayaa i soo wacday, iina sheegtay in uu Aabaheyd siiyey nin da� ah balse leh lacag. Waxaan ku heshiinay inaan kulano si�aan uga hadalno arinta nagu soo korortay.
Maherka kadib Sagal oo iska ooyneysa baa i soo wacday, iyadoo i sheegtay sidii ay wax u dhaceyn, durbadiiba intaan naxay ayaa suuxdin ladhacay. Hadaba Bulshada qisadaan akhrisaneysooy haddii ay tanoo kale ay idinku dhici laheyd sidee baad uga samata bixi laheydeen?. Hada waxan sameeyo garan maayo, waxaa igu soo yaraaday wadanka Kenya oo dhan. Sagal ayaa waxa igu sasabtay in�ay i soo baxsan doonto, halka aan anigana ka diiday. Waayo Rasuulku (NNKH) wuxu yiri, Dumarka lasoo doontay ka leexda, hadaba maxaad u maleyneysaa naag nin kale lagu daray haddii ay kaaga soo go�do. Dabcan waa wax aanan sal iyo raad ku laheyn Diinteena Suuban ee Islaam-ka.
Cali oo aad u ooy-naayey ayaa intaasi kusoo koobay dhacdadii murugta laheyd ee ku dhacday, hadaba waxaa fursad qaali ah siin doonaa, dhalinta Somaliyadeed bal in�ay inoo soo diraan sida ay u arkaan dhacdadaan, anagoo u gudbin doono Cali. Wixi fikirkaaga ah inoogu soo dir
Comment by hanaan on May 14, 2012 5:51 am
wa qiso murugo xambaarsan runti waxan dhaho ma garanayo waxan keliya oo aan dhaya wn ka xumahay wan ka xumahay
Comment by wedding reception playlist on December 15, 2011 6:14 am
Youre truly correct with this blog post!!!
Comment by ayaan 143 on February 22, 2011 1:01 pm
asc,alle waa qiso yaab leh caliyoow waxaan kula talin lahay inaad iska samirto,waayo gabadhaas waa gabr ku jeceleed lknse haduuu aabehed arintaa u tali aniga waxaan ku oran lahay iska dhaaf waayo waxaa la yiri niinkii samiro ayaa sadsiia helo,.cali walalkey aad ayaa uga xumahay inaad jaceylkaada ku guuleysan weysay.aniga waxaan igu dhacaya hadaan idiin sheego,asxaabta,aniga sandkii,2008.ayaa waxaan jecelaay wiiil waxuu joogay addis ababo,anna waan la joogay balse,aniga familkeyga ayaa ku nolaay markii dabe ayaa waxaan soo aaday,filand lkn waxaa ilaa soo darisay ciidlo,iyo murigo, aaan lasoo koobin karin,lkn waxaa dhacdaya,sadnkii 2009.ayaa sxbkey gabar uu dhalay adeerkii oo joogta wadama yurub,ayeey waxaay wiilkaan jacelahay ku tiri,abowe wan ku jecelahay,markaas ayuu ku yiri,abaayo waxaad tahay qof walasheey qali ah,markaa anna waxaan jecelahay gabar,markaa iga raali ahoow, shalay waxaad aheed walashey maantana waxaad tahya sidkoole, balse gabadhii weeydiiyey oo waxaay dhahdaya anina niin aan adiga aheen ma guursanaayo,warkaa ayaan idiinku badin sheekadii waxaay ku dhamday gabar ayaa soo wacdaay wiilka wiilka an sxbkaa lahaay waxay ku dhahday adeer wiilkaada ayaan rabaa,markaas ayuu ku yiri adeerkii waayahay gabadheyda wan ku siinaa,lkn maxa dhacaay,qof aad is dhib u jeceshahay,misna aad la gashay,balan iyo axdii,ma kula tahay inaad uga bixi laheed,markaa wiil wuu diiday,hadaa gabar guursanaayo gacalisadeeyda oo jogoto filnad ayaan guursanaaa arkaa gabadhi waxaay soo dirta lacag badan,balse jaceylku ma lacagbaa, hada wiilki�i wuu diiday oo waxaas ma ma dhacayaan,ayuu dhahday,
Comment by axmed diite on March 17, 2010 11:46 am
asc dhaman qisadan waa qiso ad murugo u leh lkn waxa la yiri nin sexday ninkisa dibi dhalay cali sxbow waxey aheyd in at qoyan ka ku qabato
Comment by ayaan on February 28, 2010 3:43 pm
asc waa qiso xadin leh
Comment by Cabdi nur on November 20, 2011 12:01 pm
Asc (1) ugu horayn waxan si khas ah usalamaya sxbkay cali?(2) waxan salamaya dhalinta jcylka/mucashiqinta somaliyed mel kasta o ay jogan?salan kadib,hadi an wax yar kahadlo qisada sxbkay kudhacday,run,ahanti wa qiso xanun&murugo&naxdin intaba leh.marka sxb mcne waxan ku oran laha allah (swt) darti uga samir jacelkini ad isla somarten gclsadadi sagal. allahna (swt) weydiso raliyo wngsan.waxa hubal ah inad sifudud uheli dontid gclso wanagsan o sagal badalkeda ah.inta kadib waxan dhalinta somaliyed dhamantod leyahay,wil&gabarba, walalayalow waxad ogtihin jcylku inusan ahayn wax sahlan/dhel&dhayal gali kara marka walalayalow ifan hadi ad kukalsonayn kcylka midka kale bifadlan waxan idin leyahay,walalkena/walashena inan lagu aburin jcyl bena/kumel gar ah; asc dhaman mucashiqinta, qorayasha ,xigmad aruriyasha, so bandhigayasha,dhamantin salamulahi wcm:
sida ay isku heli karaan lamaano isdoortey mise ay iskugu kalsoo waa jaceylkii xamaan iyo raxmo ruun (qeybtii labaad)